निशुल्क सामाग्रीहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
पुस्तकालय नेपालका सामाग्रीहरूलाई छ खण्डमा विभाजन गरिएको छ ।
१. मूल्यांकन र मननसफल पढाइ समूह निर्माणको लागि सल्लाह
२. साना बालबालिकाहरू र गैर-पाठकहरूको लागि क्रियाकलापहरू
३. सबैको निम्ति क्रियाकलापहरू
४. ठुला बालबालिकाहरूका लागि कथा
५. ठुला बालबालिकाहरूका लागि कथाबाहेकका (गैह्रआख्यान्)अन्य पाठ
६. मूल्यांकन र मनन
पाठहरूको लागि यो पृष्‍ठलाई तल सार्नुहोस् । हरेक पाठमा भिडियो गाइड र कार्यपुस्तिकाहरूको शृङ्खलाहरू समावेश गरिएको छ । गाइडलाई प्रस्तुतिको रूपमा डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ ।
भिडियो गाइड (मार्ग निर्देशन) ले हरेक पाठलाई आत्मविश्‍वासका साथ प्रस्तुत गर्नको लागि आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्दछ । यसलाई हेर्न वा डाउनलोड गर्न सकिन्छ । हामी तपाईंलाई भिडियो हेर्ने सल्लाह दिन्छौँ किनकि यसमा थप सल्लाह र सहयोगको लागि श्रव्य सामाग्री पनि राखिएको छ । यी भिडियोहरूलाई युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
विभिन्‍न आकार र क्षमताका पढाइ समूहहरू वा कक्षाहरूमा लचकताका साथ प्रयोग गर्नको निम्ति विभिन्‍न किसिमका रमाइला क्रियाकलापहरूलाई कार्यपुस्तिकाहरूमा समावेश गरिएको छ । कार्यपुस्तिकाहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्‍नुहुन्छ र अनलाइन वा अफलाइन, कक्षामा वा कक्षा बाहिर, प्रिन्ट गरेर वा सानो तथा ठुलो स्क्रिनमा देखाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
पाठ १ देखि ६ लाई हेर्नुहोस् र हामीलाई निश्‍चय छ तपाईंहरूले आफ्ना विद्यालयहरूको निम्ति उपयुक्‍त सामाग्रीहरू पाउनुहुनेछ । हामी रिडिङ्ग च्याम्पियन सामाग्री पढ्ने विशेष सल्लाह दिन्छौँ किनकि यसले पुस्तकालयको प्रयोगको निम्ति उपयोगी सल्लाहहरू प्रदान गर्छ ।
सबै सामाग्रीहरू प्रतिलिपी अधिकारबिहिन र निशुल्क छन्, र तिनीहरूलाई डाउनलोड गरेर विद्यालयहरू र पुस्तकालयहरूमा उपयुक्‍त हुने किसिमले प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
पाठ १: परिचय
पाठ २: साना बालबालिकाहरू
पा१ भिडियो गाइड
पा१ निर्माण पृष्‍ठ पा२ भिडियो गाइड
पा२ पात्रहरूको वर्णन
पा२ एकसाथ पढ्ने
पाठ ३: सबैजना
पाठ ४: ठुला बालबालिकाहरू
पा३ भिडियो गाइड
पा३ तपाईंलाई मनपर्ने कथा
पा३ कथाका प्रकारहरू
पा३ कविता र वर्णन पा४ भिडियो गाइड
पा४ कवितामा लय र पद्य
पा४ वर्णहरू विकास गर्दै
पा४ विषयवस्तु (प्रसङ्गहरू)
पाठ ५: गैर-आख्यान
पाठ ६: मूल्याङ्कन
पा५ भिडियो गाइड
पा५ शब्दकोशको प्रयोग
पा५ मानचित्रको प्रयोग
पा६ विश्‍वकोशको प्रयोग
पा६ इन्टरनेटको प्रयोग पा६ भिडियो गाइड
पा६ सामूहिक चिन्तन
पा६ प्रगति ट्रयाकर (लेखाजोखा)